CAANAHA DHIIGGA LO'DA: SABABTA, MAXAAD SAMAYNAYSAA - XOOLAHA
Dhiiga caanaha lo'da: sababaha, daaweynta
Mararka qaarkood xilliga caanaha waxay ogaadaan in lo'da ay caano leeyihiin. Xaaladdan badanaa waxay u muuqataa ka dib dhalmada waxayna sababi kartaa welwelka beeralayda, maadaama ay calaamad u tahay dhibaatooyinka qanjidhada naasaha. Tixgeli haddii aad cabi kartid caanaha, dhibaatooyinkaa waxay sababi karaan muuqaalka dhiigga ee ku jira iyo sida xayawaanka loo caawiyo.
Miyaan cabi karaa caanaha dhiigga?
Caano badani ma cabbi karaan dadka iyo weylaha. Waxaa ku jira jeermisyada, iyo ka kooban kiimikada ayaa beddeleysa tan ugu xun. Waxay yareysaa maaddada kiiska, kalsiyum, lactose iyo kordhinta saamiga chlorides iyo globulin.
Dabcan, karkarintu waxay dishaa maadada loo yaqaan "pathogenic microbes", laakiin ma hagaajin doonto tayada. Caanaha cudurka caanaha ma isticmaalaan, iyo sidoo kale lo'da daaweynta, maxaa yeelay waxay sidoo kale ku jiraan antibiotics.
Muddadan, waxaa lagama maarmaan ah in caanaha si fiican loo caano si dhammaan xiniinyaha dhiigga u soo baxaan. Haddii kale, waxay ku xiran karaan xuubka xuubka iyo fara galinta caanaha. U hubso inaad la xiriirto dhakhtarka xoolaha iyo sameynta baaritaanka iyo daaweynta xayawaanka.
Ma taqaanaa? Ragga ka soo jeeda qabiilka Bodi waxay cabaan caanaha dhiigga lo'da si ay u noqdaan kuwo dufan leh sanadka cusub. Fasaxan ayaa lagu dabaaldegaa bisha Juun, qofka guuleysta wuxuu helayaa sharaf iyo aqoonsi xubnaha qabiilka sannadka oo idil. Qaansooyinka halkan waxaa loo tixgeliyaa in ay yihiin kalkaaliyayaal, looma dilin, lakiin waxay ku dhufteen xididada, oo dhiig ku daatay iyo daboolay dhoobo.
Waa maxay sababta ay sacadu u leeyihiin dhiigga caanahooda?
Sababaha lo'da ee caanaha way ka duwanaan karaan. Tixgeli kuwa ugu caansan.
Inta badan waxay u muuqataa in lo'da ka dib dhalmada iyo la socoto calaamadaha soo socda:
bararka caanaha, muuqaalka kore ee xargaha iyo xinjiro;
geedi socodka bararka ee qaybaha barar ee candho xoolo;
caanaha biyaha lagu qasi karo dhiig;
is-qabad, nashaadyo daciif ah;
soosaarka caanaha oo yaraaday.
Xitaa marxaladda koowaad ee naaso ee kolostrum si fudud ayaa loo go'aamiyaa. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagu ururiyaa weel quraarad ah oo ku rid qaboojiyaha. Qalabeynta sheygani waxay muujinaysaa jiritaanka caabuqa.
Baro waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan waxa cudurada ku dhibi karaan lo'da iyo sida loo daweeyo.
Sababaha soo socda waxay sababi karaan naaso:
raacsanayn nadaafadda dayactirka iyo daryeelka;
dhalmada xadgudubyada xaaladaha;
qaybinta aan habooneyn dhalmada kadib;
dhaawaca birta iyo candho xoolo.
Iyada oo joogitaanka naaso ee lo'da, tallaabooyinka soo socda ayaa la qaadaa:
lo'da looma oggola inay daaqsiiso, waa mid gooni u ah oo aan loo oggolayn inuu dib u dhaco;
marka ay xiran yihiin waxay badalaan qashinka waxayna sameeyaan nadiifin maalinle ah. Waa inaysan jirin wax qorshe ah ee qolka;
si caadi ah u quudinta, yareyso qaadashada cabitaanka;
2-3 saacadoodba marwalba ku duugee candho xoolo leh cagaarsho ama cirifoono iyo caano si fiican u isticmaal gacmahaaga;
Kadib qaadashada unugyada, antibiyootikada ayaa la isku duraa (isku dar ah penicillin iyo streptomycin kasta oo ka mid ah 50,000 unug). Tani waa nidaam xanuun badan, oo lagu fududeeyo, ku dar 150 ml oo ah 0.25% novocaine in isku dar ah;
si ay u soo baxaan dhiigga xayawaanka, cusbada "glauber" cusbada lagu qasay biyo (400 garaam oo cusbo ah halkii 8 litir oo biyo ah) ayaa la waraabiyaa. Xalka noocan oo kale ah ayaa la bixiyaa nus saac ka hor inta aan la iibin;
muddada daaweynta, candho xoolo la dhaqo oo lagu duubo maro dhogor ah. Halkii aad ku maydhin lahayd, waxaad ku tirtiri kartaa cabitaanka aalkolada leh (1 qaado oo malab ah 100 garaam oo vodka ah).
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo daaweeyo naaso ee lo'da.
Joogitaanka dhiigga ee caanuhu waxay muujinayaan heer aad u daran oo ah naaso, xaaladdan, habka daweynta ayaa noqon karta sida soo socota:
oo leh hawl wadnaha oo daciif ah - subcutaneous cirbado (20%);
xididada ugu durugsan 200 ml oo ah 40% glukose xal;
cirbadeynta xididada 200 ml oo ah 10% chloride calcium;
antibiyootiko - irbadaha lagu duro penicillin 800,000 units 4-5 saacadood 3 cisho kasta.
Video: daaweynta mastitis ee lo'da Daaweynta noocan ah waa in la qoro oo ay xakameyso dhakhtar xoolaad.
Waa muhiim! Sababta ugu badan ee naaso ee lo'da waa caano aan habooneyn dhalmada ka dib. Dibiga ayaa weli wiiqaya oo ma duugi karo candho xoolo. Boorashku waa mid qaro weyn oo dhagan, sidaas awgeed caanaha geela waa inay duugoobaan oo ku dul shubaan ibta naaska ka hor inta aan la iibin. Marka caanaha mashiinku ay dhammaystiraan lo'da ilaa dhammaadka.
Sababta dhiigga ee caanaha wuxuu noqon karaa waxyeelo udhiigga ah - cayayaanka iyo dildilaaca. Tani waxaa lagu muujiyey joogitaanka dhiigga oo kaliya bilowga caanaha iyo bararka, rubucda oo jajab ah ee candho xoolo. Dhamaan xinjirrada dhiigga waa in la qaadaa waana in la qaado tallaabooyin si loo joojiyo dhiigga.
Waxay badalaan qashin iyo xayawaanka keligood ah. Barafka ayaa la geliyaa jimicsi cusub oo la arko maalinta ugu horeysa, ka dibna maalin kadibna waxaa laga sameeyaa cadaadis ka yimaada ichthyol iyo vodka. Haddii ay dhacdo dhiigbax culus, waxaa fiican in la isticmaalo daawooyinka, tusaale ahaan, isku duri 10% xalal chloride ah oo gaas ah.
Dhiig-bax yar, waxaad isticmaali kartaa daaweynta dadka. Si aad u diyaarsato mid ka mid ah daroogooyinkaas, qaado 100 garaam oo caleemo nettle ah, yar yar iyo bacda shandada, ku shub 2 litir oo biyo nadiifa ah oo isku kari 2 daqiiqo dabka aamusan. Ku kala-soocidda decoction qaybo dhowr ah oo cabitaan maalintii. Si loo fuliyo daaweyn noocaas ah toddobaadkii. Haddii dhaawaca badanaa uu sababo daaqsinka, markaa dufanku waxa uu sababaa daryeel xumo. Sababtaas awgeed, maqaarka ayaa noqda mid aan fiicnayn, dildilaashana wuu muuqdaa.
Marka la ogaado, ka dib marka la naas-nuujiyo, ibta naaska waa in lagu daaweeyaa 2% soodhadhka soodhaha leh waxayna ku dhuftey cad cadaydh. Marka uu jiro xanuun xoog leh ka hor inta aan caanaha lagu wareejin, ibta waxaa lagu dhajiyay cadar ay ku jiraan novocaine.
Waxay kaa caawinaysaa inaad akhrido waxa aad sameyn lahayd haddii lo'da uu barar cuno, iyo sidoo kale ogaado sababta ay lo'da u leedahay dheecaan cad.
Mid ka mid ah sababaha soo noqnoqda ee muuqaalka dhiigga ee caanaha lo'da ayaa noqon kara xanuunada xididdada. Sidaa darteed, haddii ay dhacdo dillaaca markabka, caanuhu wuxuu noqonayaa midab madow ah, laakiin sida caadiga ah, dhawr maalmood gudahood wax walba way dhaafaan.
Khabiiradu waxay ku talinayaan haddii ay dhacdo xaalad sidan oo kale ah, qalabka caafimaadka ee soo socda waa in loo adeegsadaa si loo cirib tiro cudurada wadnaha:
fitamiin C, K;
daawooyinka joojiya dhiigga;
Marka dhiiga laga helo caanaha, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo kormeerka caafimaadka xoolaha si looga saaro wax kasta oo halis ah, oo ay ku jiraan cudurada halbawlaha ah.
Ma taqaanaa? Si aad u jilciso maqaarka papillae, waxaad diyaarin kartaa boogaha naftaada. Si aad u diyaargarowdid, qaado galaas oo saliid ah gabbaldayaha kulul, ku dar 3 qaado oo isku dhafan oo isku dhafka ku dhex jira barkada biyaha illaa dhammeystirid dhamaystiran iyo helitaanka qoyaan.
Tallaabooyin ka hortag ah
Si looga hortago muuqaalka dhiigga ee caanaha lo'da, tallaabooyinka kahortagga ee soo socda ayaa lagula talinayaa:
qaadaan tallaabooyinka nadaafadda. U hubso inaad biyo raaciso biyo diirran kahor iyo kadib geedi socodka iibinta, ka dibna tirtir qalabka shukumaanka;
duugee oo siiso lo'da wanaagsan ka dib dhalmada;
si aad u baabi'iso muuqaalka dildilaaca, waxaad u baahan tahay ka dib markaad maydho candhuufta si aad u daaweyso ibta oo leh saliida jelly;
si looga hortago muuqaalka naaso, qolka ilaalinta lo'da waa inuu ahaado mid diiran, hawo wanaagsan, laakiin aan lahayn wax qabad;
kormeerida tayada quudinta, taas oo ay ku jiraan dhammaan qaybaha muhiimka ah ee xayawaanka. Waxay leedahay saameyn togan ee habka difaaca jirka;
waqtigeeda si aad u nadiifiso oo u bedesho qashin qubka;
noqoshada xayawaanka iyo kormeerka kormeerka xoolaha.
Haddii dhiiggu ka muuqdo caanaha lo'da, xayawaanka waa in lagu muujiyaa xoolaha iyo tallaabooyinka waa in loo qaado si loo tirtiro sababaha. Caanaha noocan ah waa in si fiican loo wareejiyaa, waana in aan la cunin dadka iyo xayawaanka.
Waa muhiim! Haddii dhiig laga helo caanaha ee la xidhiidha sameynta burooyinka ku dhaca ibta, markaa qaababkaas waxaa lagu saaraa oo kaliya qalliinka iyada oo ku lug lahaanshaha khabiirka ku habboon. Sababta waa daryeel iyo habdhaqan aan habooneyn oo ku yaal dildilaaca oo muuqda.
Iyadoo lafdhabarta, waxaa ku jira maadada loo yaqaan "pathogenic microbes" oo leh unug wax ka beddelaya oo saameynaya qiimaha nafaqada. Si looga hortago xaaladdan oo kale, waa in la qaado tallaabooyin ka hortag ah.
Caanaha dhiigga leh waxay noqon kartaa mid ka mid ah dhaawaca candho-foori, ama geeddi-socodka waxyeelada waxyeelada leh ee cayayaanka ee caanaha laga sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo qulqulka dhiigga, kiis kasta waxaa jira astaamaha bukaan-socodka dhaawaca xubnaha. Haddii aysan jirin astaamo kale, waxaa suurtagal ah in dhaawaca uu yahay dhab ahaantii. Waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo caano saafi ah oo lo'da ah.
Qadar yar oo dhiig ah caanaha ama waxyeellada farsamada ee candhuufta, hababka soo socda ayaa waxtar u leh: Diyaarinta Vitamin C; kalsiyum iyo fitamiin K; xalinta adrenaline (maxaliga); wakiilada hemostatic (hemarctin). La tashiga kaamiladu ma noqon doonto mid aad u badan. Marka xannibaadda kanaalka ibta leh xinjir dhiig oo soo saara masax.